यसरी भाग्य चम्कियो यी बलिउड सेलिब्रिटीहरुको | Lifemandu
यसरी भाग्य चम्कियो यी बलिउड सेलिब्रिटीहरुको
एजेन्सी । फिल्ममा पाउने एउटा सानो भुमिकाले धेरैको मन जित्न सफल भइन्छ । बलिउडमा कतिपय यस्ता प्रख्यात कलाकारहरु रहेका छन् जसले ‘गेस्ट अपिरेन्स’का भरमै चर्चा बटुले र आफ्नो भाग्य समेत बदल्न सफल भए ।
धेरै कलाकारहरु अब ‘गेस्ट अपिरेन्स’ को भुमिका गर्न समेत हिचकिचाउँदैनन् । एउटा सानो भुमिका कारण नयाँ परिचय बनाउने कलाकारहरुले आफ्नो जीवनमा यति ठुलो सफलता पाइएला भनेर नसोचेको समेत बताउँछन् । बलिउडमा केही यस्ता कलाकारहरु छन् जसको भाग्य ‘गेस्ट अपिरेन्स’ बाट चम्किएको थियो ।
२. नवाजुद्धिन सिद्धीकी
३. विक्की कौशल
४. बिक्रान्त मेसी
टेलिसिरियलबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका बिक्रान्तले सन् २०१३ मा आएको फिल्म ‘लुटेरा’ बाट फिल्मी करिअर सूरु गरेका थिए । उनले उक्त फिल्ममा सपोर्टिङ रोल गरेका थिए । आज उनी बलिउडमा व्यस्त अभिनेताका रुपमा परिचीत छन् । उनी र कल्की कोचलिन अभिनय गरेको फिल्म आउँदैछ ।
पैतालामा यस्ता चिन्ह हुने मानिस भाग्यमानी हुन्छन्, हेर्नुस् तपाईको छ कि छैन ?
एजेन्सी । शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यहाँ रहेका रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव बताउन सकिने बताउँछ । हातका मात्र होइन खुट्टाका रेखा पनि मानिसको स्वभाव र भाग्य विश्लेषणका लागि महत्वपूर्ण हुन
कतै तपाईको पैतालामा पनि यस्तो चिन्ह त छैन ? जान्नुहोस् यसको अर्थ
बलिउडका यी चर्चित स्टार, जो एक–अर्कासँग काम गर्न चाहँदैनन्
मुम्बई । सामान्य मानिसजस्तै सेलिब्रिटीहरुको मनपर्ने र नपर्नेहरु हुन्छन् । उनीहरु कसैसँग काम गर्न मन पराउँछन् भने कसैसँग काम गर्न मनै पराउँदैनन् ।